Iyo FBI haina chaakawana pane iyo San Bernardino iPhone | IPhone nhau
Mwedzi, mavhiki, zvinyorwa, zvinyorwa, nhau ... Zvese izvi uye zvakawanda nezve kumeso kumeso pakati peApple neFBI, uye ndezvekuti nekuda kwezvikonzero zve "kuchengetedzeka kwenyika" zvaive zvakafanira kuti Apple ipfuure zvese zvakavanzika kuenderera nekuvhura mudziyo, kunyanya iyo iPhone 5c, iyo yainzi yaive nechekuita nekurwiswa kweSan Bernardino nekuti yaive yemumwe wemagandanga. Mhedzisiro yehondo yakauya apo FBI yakafunga kusiya gakava neApple pamusoro pekuvhura uye mikova yekumashure muIOS nekuti yaive yazobudirira nenzira dzayo. Pakupedzisira FBI yakawana iyo data pane iyo iPhone 5c, zvisinei, ivo havana chavakawana zvachose chinhu chekukosha mukati me data rakachengetwa.
Pakati CBS News yakadzokorora mishumo inosimbisa chokwadi chekuti FBI haina kuwana chero chaiyo uye yakakosha data iyo inojekesa zvachose hapana nyaya yacho. Chirevo chinoratidza kuti FBI yakanyatsoongorora zviri mukati meiyi iPhone 5c uye haina chavakawana chekufarira, zvirinani izvozvi. Zvichakadaro FBI yanga isingade kuratidza, zviripachena, nekuti kusekwa kwacho kungave kwakakura.
Zvekare zvakare takatarisana nehudzvanyiriri hwe "chengetedzo", iyo FBI inogara ichinongedzera kuchengetedzeka kwenyika, kune kukosha kwedata rakadai. Ivo vakaona zvichinyanya kudikanwa kuti Apple iise inozivikanwa "mashure emashure" kutonga zvese pasi rose ruzivo rwakazara neIOS, zvisinei, Tim Cook aiziva kumira akasimba, aiziva kuti zvaisakosha chaizvo, kuti kwese kwaive kuwedzeredza kweFBI nechinangwa chakajeka chekutora mukana wehurongwa hwekurwisa kutyora kuvanzika kwevashandisi vese veApple. Pakupedzisira nguva yanga ichida kubvumirana neMukuru weApple, kutsvaga kwacho kwaive kusingakoshe uye kwaingova chikonzero chekuita kwakanyanya kusviba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone Kuchengetedza » Iyo FBI haina chaakawana pane iyo San Bernardino iPhone